စကျတငျဘာ 3, 2018 – Healthy Life Journal
မေး. မေမေက ဆီးချိုရှိမှန်း ၂၀၁၆၊ ၅လပိုင်းလောက်မှသိပါတယ်။ သိသိချင်း ဆရာမကြီး ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေးနဲ့ တန်းပြပါတယ်။ ဆီးချိုက ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကျောက်ကပ်ကိုထိနေပြီလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်အရဆိုရင် ကျောက်ကပ်ကိုထိသွားပြီလားရှင်။ မြတ်နိုးခင် (FB) ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသက်နဲ့...
၀က်ရဲ့မျက်ကြည်လွှာ အစားထိုးပြီးနောက် မျက်စိပြန်မြင်လာတဲ့ တရုတ်အမျိုးသား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှ အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ မျက်လုံးတစ်လုံးဟာ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ်တောင် ပြန်မမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုအခါ ၀က်မှ မျက်ကြည်လွှာနဲ့အစားထိုးခွဲ စိတ်ပြီးနောက် အဆိုပါ အမျိုးသားရဲ့ မျက်လုံးဟာ ပုံမှန်အတိုင်းနီးပါး...
– သံပရာရည် ညှစ်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းပူပူ ဒါမှမဟုတ် စွပ်ပြုတ်ပူပူသောက်ပါ။ – ငုံဆေးငုံပြီး လည်ချောင်းစိုစွတ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ – ဆားရေနွေးနဲ့ အာလုတ်ကျင်းပေးပါ။ – အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်တာကြောင့် လည်ချောင်းနာ သက်သာစေပါတယ်။ – လေထုစိုထိုင်းဆများစေတဲ့ စက်ကိုအထူးသဖြင့် အိပ်စက်နေချိန်မှာ...
ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်း (Acute Pancreatitis)
ပါမောက္ခဦးအေးမွန်( ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ပန်ကရိယရောင်ရမ်းမှုဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ ပန်ကရိယဆိုတာ အစာအိမ်အောက်ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်တည်ရှိနေတဲ့ အင်္ဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကရိယကို မုန့်ချိုအိတ်လို့လည်း တချို့က ခေါ်ကြပါတယ်။ ပန်ကရိယက အစာခြေရည်တွေကို...
ချစ်စိတ်ကို သဘာဝကျကျတိုးစေမည့် အစာများ
၊ ကိုထက် ၊ အောက်ပါအစားအစာတွေအားလုံးက ချစ်စိတ်ကိုတိုးစေတယ်လို့ လူသိများကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့အစာတွေကသာ ချစ်စိတ်ကိုတိုးစေပြီး တချို့အစာတွေက ချစ်စိတ်တိုးစေတဲ့ အာနိသင်မရှိကြောင်း လေ့လာသူတွေက ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ (၁) ငှက်ပျောသီး ငှက်ပျောသီးကို စားပေးတာက သင်ရဲ့လိင်မှုဘ၀ကို အားကောင်းစေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ငှက်ပျောသီးမှာ...
ပျိုမေတို့ ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုအတွက် သဘာဝဆေးတစ်လက်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာက အမျိုးသမီးကြီးငယ်တွေကြား အဖြစ်များပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဝက်လောက်က အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို မှီဝဲရတယ်လို့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးမလိုဘဲ သဘာဝအတိုင်းသက်သာနိုင်မယ့် ကုထုံးတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ရာသီလာရက်အတွင်း...